नुहाइरहेकी थिइन् महिला, आफ्नै कुकुरले बाथरुममै आएर गर्यो यस्तो, हिरो बन्यो कुकुर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी। अमेरिकाको वाशिङटनकी एक महिलालाई नुहाइरहेका बेला आफैंले पालेको कुकुरले टोक्टो । रोचक त के भने टोकेकै कारण त्यो कुकुर हिरो बनेको छ । वाशिङटनकी महिला नोलालाई कुकुर मन पर्र्दैनथे तर छोराछोरीको जिद्दीका कारण उनले कुकुर पालेकी थिइन् ।
त्यो दिन नोला घरमा एक्लै थिइन् । उनले म्युजिक सिस्टममा ठूलो स्वरमा गीत बजाइन् र नुहाउन गइन् । उनी बाथटबमा नुहाउँदै थिइन् उनको कुकुर बाथरुमको ढोका खोल्दै भित्र पस्यो । उनले बुझ्न सकिनन् कि कुकुर बाथरुममा किन आयो । त्यसपछि कुकुरले बाथटबनजिकै गएर उनको आत आफ्नो दाँतमा दबायो । कुकुरले टोक्न थालेको देखेपछि नोला डराइन् र भाग्न खोजिन् । तर, कुकुरले उनको हात छोड्नै मानेन । नोलाले महसुस गरिन् कि कुकुरले टोक्न खोजेको थिएन बरु उनको हात तान्न खोजिरहेको थियो । उनले कुकुरको इशारा बुझेपछि उठिन् ।
बाथरुमको ढोका खोल्दा उनले देखिन् कि पूरा घरमा आगो लागिसकेको थियो । आगो बाथरुममा पनि पुग्यो । नोला र कुकुर बाथरुममै फसे । नोलाले त्यहाँबाट कसरी निस्कने भन्ने सोच्न सकिरहेकी थिइनन् तर कुकुरले बाहिर निस्कने बाटो बुझ्यो । ऊ आगोबाट बच्दै अगाडि बढ्यो । कुकुरले पटक पटक पछाडि फर्केर हेथ्र्यो कि नोला उसको पछिपछि आइरहेकी छन् कि छैनन् । कुकुरले यस्तैगरी उनलाई बाहिरसम्म सुरक्षित लिएर गयो ।
घरबाट निस्केकी नोला निकै डराएकी थियन् । उनको कार पनि घरसँगै राखिएको थियो । कारलाई बचाउन नोला कारको चाबी लिन भित्र जान लागिन् । तर, कुकुर ढोकामा गएर उनको बाटो रोक्यो । नोलाले भित्र जाने निकै प्रयास गरिन् तर कुकुरले उनलाई भित्र जानै दिएन । यही बीचमा भित्र भयानक विष्फोट भयो । नोलाले बुझिन् कि उनको कुकुरलाई विष्फोट हुने पनि अनुमान थियो ।